कुन कुन राशिका महिला कसरी तयार हुन्छिन त शारिरीक सम्बन्ध बनाउन? – SMARTINFONEPAL
एजेन्सी : समाजमा महिलाहरूको राशि अनुसार सहवासको चाहना फरक फरक हुने गर्दछ त्यसैले तपाईको पार्ट’नर कुन राशिको हो सोही अनुसारले सहवास गर्न सक्नु हुनेछ । मेष राशि : यो राशिका महिलाको मुख र निधार एकदमै सं’वेदनशील हुन्छ । तपाईंले मुख र निधारमा…
एजेन्सी :महिलाहरूको राशि अनुसार स’हवासको चाहना फरक फरक हुने गर्दछ त्यसैले तपाईको पार्ट’नर कुन राशिको हो सोही अनुसारले स’हवास गर्न सक्नु हुनेछ ।
मेष राशि : यो राशिका महिलाको मुख र निधार एकदमै सं’वेदनशील हुन्छ । तपाईंले मुख र निधारमा चु’म्बन गर्नु भयो भने उनीहरु चाँडै स’हवासको लागि तयार हुन्छन् वा महिलामा चाँडै यौ न उ’त्तेजना बढ्दछ ।
वृष राशि : यो राशिका महिला जति धेरै रो’मान्टिक हुन्छन् त्यति नै धेरै समय यौ न क्रियाकलापमा राजी गराउन समय लाग्दछ । त्यसैले तपाईंको सह’वास पा’र्टनर वृषराशिवाला छन् तर तपाईं चाँडै यौ न क्रियाकलाप गर्ने सोच्नु हुन्छ भने तपाईंले दुःख पाउनु भयो अर्थात् तपाईंको यौ नजीवन त्यति सहज हुने छैन
मिथुन राशि : यो राशिका महिला स’हवासको लागि सधैँ सक्रिय रहन्छन् । यिनीहरु आकर्षक वस्तुप्रति निक्कै नै ध्यान दिने हुन्छन् । उनीहरुलाई हातमा चु’म्बन गर्दा निक्कै आनन्द आउँछ । साथै यो राशिका महिलाहरु यस्तो रो’मान्टिक ठाउँमा जान रुचाउँछन् जहाँ उनीहरुका पुराना कुरा याद आउन् ।
कर्कट राशि : यो राशिका महिला निक्कै भा’वुक र मा’नसिक रुपमा पनि सं’वेदनशील हुन्छन् । यसै कारणले पनि स’हवासमा खासै रुची राख्दैनन् भने स’हवास गर्दा पनि भरपुर आनन्द लिन सक्दैनन् ।
सिंह राशि : सिंहराशिका महिलालाई बनावटी कुराहरु वा देखावटी सौन्दर्य र चिजबस्तुहरुप्रति निक्कै आकर्षण हुन्छ । यिनीहरु रो’मान्टिक वातावरणमा चाँडै र सजिलै घुलमिल हुनसक्छन् । यो राशिका महिलाहरु आफ्नो पा’र्टनरलाई आफूमाथि हावी हुन भने दिँदैनन् । यिनीहरुको पिठ्युँ स’हवासको लागि निक्कै सं’वेदनशील हुन्छ ।
कन्या राशि : यो राशिका महिला आफ्नो यौ न इच्छालाई चाँडै बाहिर निकाल्न चाहँदैनन् तर भित्र भने सह,वासको भोक निक्कै हुने गर्दछ । यिनीहरुलाई पेटमा कि’स गर्न निक्कै मन पर्दछ । स’हवास सम्पर्क गर्नु भन्दा अघि उनीहरुलाई पेटमा स्प’र्श गर्ने वा छुने गर्नु उपर्युक्त हुन्छ ।
तुला राशि : यो राशिका महिलाहरु स’हवासको लागि निक्कै नै छिटो तयार हुन्छन् । उनीहरुको राशि स्वामी शुक्र भएकोले पनि यस्तो भएको हो । शुक्रलाई यौ न उ’त्तेजना बृद्धि गर्ने ग्रहको रुपमा लिइन्छ ।
वृश्चिक राशि : यो राशिका महिला स’हवासको लागि निक्कै नै सं’वेदनशील हुन्छन् । उनीहरुलाई बडी म’साज मन पर्ने भएकोले म’साजबाटै चाँडै उ’त्तेजना पैदा गराउन सकिन्छ ।
धनु राशि : धनुराशिका महिलाहरु धार्मिक प्रकृतिका हुन्छन् । यिनीहरुलाई रो’मान्सको लागि एकान्त ठाउँ मन पर्छ । यो राशिका महिलालाई रोमा,न्टिक गीत, स’हवास फिल्म वा स’हवाससम्बन्धी कुराकानीबाट चाँडै प्रभावित गर्न सकिन्छ । यिनीहरुको जाँ,घ सबैभन्दा सं’वेदनशील हुन्छ ।
मकर राशि : यो राशिका महिलाको खुट्टा निक्कै सं’वेदनशील हुन्छ । खुट्टाको कुनै पनि भागमा कि’स गरेर वा स्प’र्श गरेर उनीहरुलाई उत्ते’जना बढाउन सकिन्छ । यिनीहरुलाई सह”वासको दौरान कुराकानी गर्न बिलकुलै मन पर्दैन । यिनीहरुलाई रिझाउन घुमफिर गर्ने वा रो’मान्टिक कुराकानी गर्न सकिन्छ ।
कुम्भ राशि : यो राशिका महिलाको काँध तथा कुहिनो ज्यादै संवे’दनशील हुन्छ । त्यसैले यो भागमा अलिकति पनि स्पर्श हुँदा उनीहरु चाँडै उ’त्तेजित बन्दछन् । यिनीहरुलाई रातीको समयमा नुहाइ धुवाई गरेर स’हवास गर्न निक्कै मन पर्छ । यिनीहरुलाई फरफ्युम पनि निक्कै मन पर्दछ ।
मीन राशि : यो राशिका महिलालाई आँखामा आँखा जुधाएर हेर्न ज्यादै मनपर्छ । यिनीहरुलाई थोरै ज’बरज’स्ती वा थोरै चलेको पनि मन पर्छ । यिनीहरुको कुर्कुच्चा निक्कै सं’वेदनशील हुने भएकोले यहाँ म’साज गरेर पनि उ’त्तेजना बढाउन सकिन्छ ।
Previous याैन केबल बच्चा जन्माउनका लागि होइन, केवल मनोरञ्जनको लागि हुनेछ ?
Next महिला योनीका आकार थरिथरिकाः यौनसन्तुष्टिमा फरक पर्छ के ?